Nzvimbo yepasi rose yekutengesa spacecraft nzvimbo inovakwa muFlorida
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Space Tourism » Nzvimbo yepasi rose yekutengesa spacecraft nzvimbo inovakwa muFlorida
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Space Tourism • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Iyo ficha ichavakwa paLaunch and Landing Facility (LLF) paMerritt Island, Florida uye ichave ine gumi anokwana otomatiki uye akawedzera anokwanisa anokwanisa kugadzira zviuru zvemhando dzakasiyana dzemuchadenga mota pagore.
Florida Gavhuna Ron DeSantis anozivisa kuti Terran Orbital ichaisa $ 300 miriyoni muFlorida.
Iyo 660,000 mraba tsoka tsoka Terran Orbital nzvimbo ichagadzira ingangoita 2,100 mitsva mabasa muFlorida.
Nzvimbo iyi ichave yepasi rose uye yepamberi "Indasitiri 4.0" nzvimbo yekugadzira mota nzvimbo.
Terran Orbital, satellite solution company, in partnership with Space Florida, Florida's aerospace and spaceport development authority, vakafara kujoina nhasi neFlorida Gavhuna Ron DeSantis paakazivisa hurongwa hwaTerran Orbital hwenyika hombe uye yepamberi nzvimbo "Industry 4.0" nzvimbo mota yekugadzira nzvimbo. Iyo ficha ichavakwa kuLaunch and Landing Facility (LLF) paMerritt Island, Florida uye ichave ine gumi anokwana otomatiki uye akawedzera anokwanisa anokwanisa kugadzira zviuru zvemhando dzakasiyana dzemuchadenga mota pagore.
Iyo 660,000 mativi tsoka tsoka ichave nekambasi-yakavakirwa AI inodzorwa kupa cheni inogonesa Terran Orbital kusimudzira mukurumbira wayo mukurumbira wekuvimbisa mamishinari uye kugutsikana kwevatengi. Iyo nzvimbo inozozvirumbidza zvakare 3D kudhinda uye yekuwedzera michina yekugadzira matekiniki kubvumidza inokurumidza nzvimbo mota kuendesa kumusika, pamwe nehunyanzvi hwekugadzira nekugadzira yemhando yepamusoro, tekinoroji yepamusoro, yakadhindwa wedunhu bhodhi gungano ine yakawanda yemagetsi yekuchengetedza vaults. Uye zvakare, iyo nzvimbo inoshandisa yakawedzera uye inobatsira vashandi vechigadzirwa mitsara kugadzira yakawanda yakawanda yakaoma yakaoma emagetsi uye mega michina.
"Ndiri kufara kuzivisa kuti Terran Orbital ichaisa mari inosvika mazana matatu emamirioni emadhora muSpace Coast kuvaka nzvimbo hombe yekugadzira setiraiti pasi rose," akadaro Gavhuna DeSantis. “Kugadzira maseteraiti uye kucharamba kuri chikamu chakakosha cheupfumi muSpace Coast, uye nechiziviso ichi tirikusimudzira. KuFlorida tichaenderera mberi nekutungamira nzvimbo nekudyara muzvivakwa, kudzidzisa vashandi vane hunyanzvi uye kuchengetedza mamiriro ehupfumi anotendera makambani akaita seTerran Orbital kuti ibudirire. Ndinovakorokotedza nesarudzo huru yekuuya kuFlorida. ”
“Tinofara kubatana navo Nzvimbo Florida kuvaka chivakwa chatinoona sechinhu chenyika: mupiro unobhadharwa nevezvokutengeserana kunzvimbo yenyika maindasitiri. ” akadaro Marc Bell, co-founder uye mukuru mukuru weTerran Orbital. “Kwete chete kuti tichakwanisa kuwedzera kugona kwedu mukugadzira kuti tikwanise kuzadzikisa kudiwa kwezvigadzirwa zvedu, asi tichaunzawo mikana yakakosha yekugadzira mota munzvimbo neHurumende yeFlorida, tichiisa mari inodarika mamirioni mazana matatu emadhora mukuvaka nekushandisa zvitsva. Pakupera kwa300, tichagadzira mabasa matsva angangosvika zviuru zviviri nemubhadharo wepakati pe $ 2025. ”
"Nzvimbo Florida inokorokotedza Terran Orbital nekusarudzwa kwayo kweFlorida neLaunch and Landing Facility yedu paKennedy Space Center (KSC) kune chivakwa chitsva chekugadzira satellite, "akadaro Mutungamiri weSpace Florida uye CEO Frank DiBello. "Chiziviso ichi chimwezve chiitiko chakakosha muhutungamiriri hweFlorida mune zvekutenga muchadenga, zvichipa budiriro yemhando yepamusoro, kusanganisira kuvhurwa-kudiwa uye kugona kuita setiraiti-pane-kudiwa paspaceport. Tinotarisira kubudirira kwaTerran Orbital mumakore anouya uye nekuenderera mberi kwekuita uye kukura muFlorida ”
Frankfurt Airport inoshandisa 87 ichangoburwa biometric-inogonesa ...
Favorite Favorite Favorite Kuenda kune vekuAmerican Zhizha...
IMEX Champions Chiitiko Tekinoroji Kuburikidza NeChiitiko ChitsvaMB...